Galfata Kasaa Gulaali
Galfata kasaa filatamee gulaala. Fuulduraa yk keessa galfataa kasaa cuuqasi, isa booda ajaja kana filadhu.
Halqara bafataa baniitti Kasaa Galfataa filadhu
Galfataa kasaa filatamee gulaala.
Yoo barbaachisa ta'ee argamee galfataa kasaa gulaali. yammuu galfataa kasaa fooyyessittu, galfataa kasaa korkoddii galmee keessaa osoo hintaanee, kasaa keessatti barruu haaraa qoofattu mulattaa. Fakkeenyaaf, kasaa ajaja kana waliin "Bu'uura, akasuumaas waliigala ilaalii" saagu ni dandeessa.
Kasaa sadarkaa hedduu uumuuf, Sadarkaa galfataa kasaa jalqabaaf maqaa barreessi, ykn tarree irraa maqaa fili. galfatii kasaa ammaa maqaa kana gadiitti ida'ateera.
Sadarkaa galfataa kasaa lammataaf maqaa barreessi, ykn tarree irraa maqaa fili. Galfatii kasaa ammaa maqaa kana gadiitti ida'ameera.
Galfataa filatamee kasaa irraa haqa. Galfatii barruu galmee keessaa hin haqamne.
Dhuma xiyyaa gara bitaatti
Dhuma xiyyaa mirgatti
Galafatoota kasaattiKabala Naanna'iinsaa waliin atattaammaan utaaluu ni dandeessa.
Title is: Galfata Kasaa Gulaali